Dhacdada Apple hadda waa rasmi: waxay noqon doontaa Sebtember 14 | Waxaan ka imid mac
Munaasabadda Apple hadda waa rasmi: waxay noqon doontaa Sebtember 14
Hadda waxaad ku qori kartaa ajendahaaga bisha Sebtember 14, toddobada galabnimo, waqtiga Isbaanishka, dhacdadu waxay ka bilaaban doontaa halka Apple uu na tusi doono iPhones -ka cusub ee 13 ee sannadkan, iyo waxyaabo kale oo yar.
Shirkadda ayaa hadda si rasmi ah ugu dhawaaqday. Markaa xanta iyo mala -awaalka ku saabsan maalinta hadal -hayaha ugu weyn ee Apple ee sannadka ayaa dhammaaday. Waxay noqon doontaa dhacdo cusub oo dalwaddii ah, sidii aan u barannay tan iyo markii uu dilaacay masiibada farxadda leh. Markaa waxaan hore u haynaa taariikh iyo cinwaan loogu talagalay dhacdada: «California qulqulka«.
Dhacdo cusub oo dalwaddii ah, (oo hubaal ahaan horeba loo duubi doono) ayaa durba lagu calaamadeeyay casaanka jadwalka dhammaan taageerayaasha Apple. Waxay noqon doontaa 14ka Sebtember, toddobada galabnimo, waqtiga Isbaanishka. Dhacdo la yiraahdo «California streaming» meesha Tim Cook iyo kooxdiisa ayaa sanadkan soo bandhigi doonta iPhones -ka cusub, iyo waxyaabo kale oo dhowr ah.
Marka laga reebo kala duwan ee cusub ee iPhone 13, shirkadda ayaa la filayaa inay soo bandhigto tan cusub Apple Watch Taxanaha 7. Waxaa la isla dhex marayaa in Tim Cook uu sidoo kale jeebkiisa kala soo bixi doono labo ka mid ah jiilka saddexaad ee jiilka AirPods. Waan arki doonnaa.
Waan arki doonaa haddii ay sidoo kale na tusayaan laba iPad oo cusub oo Apple qorsheyneyso inay soo saarto ka hor dhammaadka sanadka: mid cusub iPad mini iyo cusub iPad heerka aasaasiga ah.
"California streaming" ayaa hawada soo geli doonta nool iyada oo loo marayo kanaalada caadiga ah ee dhammaan furayaasha muhiimka ah ee Apple ilaa hadda sameeyay. Kuwani waxay ku jiraan websaydhka Apple, kanaalka YouTube -ka ee shirkadda, iyo iyada oo loo sii marayo barnaamijka Apple TV ee iPhone, iPad, Mac, iyo Apple TV. Ma jiraan wax cusub halkan.
Waxa aan sugeyno waa ogeysiisyada caadiga ah sanad walba taariikhaha siideynta rasmiga ah ee wareeggaaga xiga ee cusboonaysiinta software. Tan waxaa ka mid ah macruufka 15, watchOS 8, iyo tvOS 15. macOS Monterey, dhanka kale, malaha ma imaan doonto ilaa dhacdo Mac-gaar ah soo socota.
Dhacdo soo socota oo dhici doonta bisha Oktoobar ama Nofembar ayaa si gaar ah diiradda loogu saaray kombiyuutarada Apple, halkaas oo lagu soo bandhigi doono MacBookga cusub iyo softiweerka Mac -yada sannadkan: macOS Monterey.
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Apple » Noticias » Munaasabadda Apple hadda waa rasmi: waxay noqon doontaa Sebtember 14
Qorshayaasha ilaalinta ilmaha ee Apple, ku dhawaad ​​qofna uma muuqdo inuu jecel yahay
Waxaad hadda soo dejisan kartaa qaar ka mid ah darbiyada derbiga ee Mac OS X oo dib loogu habeeyay 6K